Mpanamboatra fitondra-tena - Orinasa mpamatsy sy famatsiam-bola any Shina
DDG-GYW Sensor Fitaovana Inductive Inductive
Ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana fantsom-bolan'ny zavamaniry sy ny sakafo, ary koa ny famokarana simika ny tontolo iainana maloto. Ny fandrefesana asidra mety sy ny fandrefesana ny vahaolana masira mifantoka betsaka latsaky ny 10%.
DDG-GY Industrial Inductive Conductivity / TDS Sensor
DDG-30.0 Sensor amin'ny fitantanana indostrialy
Ny andiana indostrian'ny fitaritana electrodes dia ampiasaina manokana amin'ny fandrefesana ny sandan'ny fitaritana rano madio, rano tsy misy fangarony, fitsaboana rano, sns .. Mety indrindra amin'ny fandrefesana ny fitaritana ao amin'ny toby famokarana herinaratra sy ny indostrian'ny fitsaboana rano.
DDG-10.0 Sensor amin'ny fitantanana indostrialy
DDG-1.0PA Sensor momba ny fitantanana indostrialy
DDG-1.0 Sensor momba ny fitantanana indostrialy
Ny andiana indostrian'ny fitondra-electrode dia ampiasaina manokana amin'ny fandrefesana ny lanjan'ny fitondra-drano amin'ny rano madio, rano madio mangarahara, fitsaboana rano, sns.
DDG-0.1F & 0.01F Sensor amin'ny fitantanana indostrialy
DDG-0.1 Sensor momba ny fitantanana indostrialy
DDG-0.01 Elektroda fitondra indostrialy
BH-485-DD-10.0 Sensoran'ny fitantanana nomerika
BH-485 andiana electrode conductivity an-tserasera, ao afovoan'ny electrodes dia mahatratra ny fanonerana mari-pana mandeha ho azy, ny fiovam-po signal digital ary ny asa hafa. Miaraka amin'ny valiny haingana, vidin'ny fikojakojana ambany, tarehimarika fandrefesana an-tserasera sns. Ny electrode mampiasa protokol fifampiresahana Modbus RTU (485) mahazatra, famatsiana herinaratra 24V DC, maody efatra tariby dia afaka miditra amin'ny tambajotra sensor.
BH-485-DD-1.0 Sensoran'ny fitantanana nomerika
BH-485 andiana electrode conductivity an-tserasera, ao afovoan'ny electrodes dia mahatratra ny fanonerana mari-pana mandeha ho azy, ny fiovam-po signal digital ary ny asa hafa. Miaraka amin'ny valiny haingana, vidin'ny fikojakojana ambany, tarehimarika fandrefesana an-tserasera sns. Ny electrode mampiasa protokol fifandraisana Modbus RTU (485) mahazatra, famatsiana herinaratra 24V DC, maody efatra tariby dia afaka miditra amin'ny tambajotra sensor.
BH-485-DD-0.1 Sensoran'ny fitantanana nomerika